‘सरकारले सकेन, अब म गर्छु महामारी नियन्त्रण’ - Nepali in Australia
May 20, 2021 autherLeaveaComment on ‘सरकारले सकेन, अब म गर्छु महामारी नियन्त्रण’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफूले महामारी नियन्त्रणको अगुवाई गर्ने बताएका छन् । उनले महामारी नियन्त्रण गर्न गठित सरकारी संयन्त्र खारेजीको समेत माग गरेका छन् । यससँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा केन्द्रीय कोभिड नियन्त्रण इकाई बनाउने निर्णय गरेको छ ।
एक जना स्थायी कमिटि सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले गोर्खामा ब्यस्त छन् । प्रचण्डको कमाण्डमा केन्द्रीय कोभिड नियन्त्रण इकाई बनाउने, सदस्य संख्या भने श्रेष्ठ लगायतका नेतासँग सरसल्लाह गरेर टुंग्याउने र संख्या सकेसम्म सानो बनाउने निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
पार्टी श्रोतका अनुसार यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कोभिड इकाई रहने छन् । प्रदेशमा भने पार्टीका प्रदेश इन्चार्जले त्यसको नेतृत्व गर्ने छन् । बैठकले त्यस्तो युनिट पाँच दिनभित्र बनाइ सक्न पार्टी कमिटीमा सर्कुलर पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको र कमिसन तन्त्रमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसी खारेजको माग समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारत जाने नेपालीका लागि अब भिसा अनिवार्य चाहिने (हेर्नुस् भिसासम्बन्धी सूचना सहित (NOC)) सहि कि गलत आ -आफ्नो प्रत्रिकृया दिनुहोस् !
यस्तो कारण देखाउँदै सर्वोच्चले गर्यो ७ मन्त्रीको पद खारेज, ओली सरकारलाई अहिलेसम्मकै ठूलो झट्का !
मैले प्रचार नगरेर मात्र हो, लोडसेडिङ हटाएको मैले हो – रायमाझी